Oppo Reno ji teknụzụ eji arụ ọrụ ọdịyo nke Nokia | Gam akporosis
Nokia na-enwetakwa ọkwá zuru ụwa ọnụ ọzọ n'ihi nlọghachite nke ama ama Nokia, nke a yiri ka ọ mere ka anyị chefuo na Nokia nwere nsogbu ndị ọzọ na-ahụ maka teknụzụ, gụnyere ngwaike na nrụpụta akụrụngwa. Thelọ ọrụ Finnish nwekwara akara OZO, nke na-arụpụta igwefoto dị elu na teknụzụ ọdịyo.
Ọ na-apụta na ama ọhụụ Oppo Reno na ulo oru na otutu amamihe atụmatụ nwekwara Teknụzụ ndekọ ọnụ igwe OZO, nke amara dika OZO Audio. Nke a na-agwa anyị na ụlọ ọrụ ahụ na-agbasawanye ụlọikwuu ya na ụlọ ọrụ, ọ bụghị naanị na smartphones.
Ndi Nokia kpughere ozi a na akụkọ Q2019 2019 ya, ebe okwuputara na mbido QXNUMX XNUMX, Oppo weputara ama ohuru ohuru, Oppo Reno, nke na-eji Nokia OZO Audio technology. Nokia ekpugheghi ma ọ bụrụ na OZO Audio dị na ụdị Reno ma ọ bụ 10X mbugharị mbipute, ma ọ bụ ha abụọ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị nọ na otu, ị ga-abụ na nke ọzọ.
Na-atụgharị uche, Oppo akpọtụghị atụmatụ ọdịyo a n'oge mmalite nke ụdị Reno. Nke a nwere ike ịbụ site na atụmatụ nke ika ahụ, ebe ọ bụ na Nokia bụ onye na-asọ mpi na mpaghara nke smartphones, dịka ndị nrụpụta ndị ọzọ, dịka Xiaomi na OnePlus.
Chineselọ ọrụ China nwere ike ọ gaghị achọ ka ọrụ ahụ kpuchie igwefoto nwere ike ịbịaru 10X nke nwere ike ịpụta nke bụ isi ihe gbasara mbipụta mbugharị Reno 10x na Reno 5G nke emepere na nso nso a Europe, na ọ bụ ya mere na ọ kọwaghị nkọwa ahụ na njedebe ya dị elu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Oppo Reno ji teknụzụ eji egwu ọdịyo nke Nokia
A na-emelite Galaxy S10 iji melite batrị ya